BackGround History » Technological University (Toungoo)
Technical High School(Toungoo) was first established on the Yangon-Mandalay Highway near Kanyoe (village) in Toungoo, Bago Division in June,1982. To increasingly produce medium-grade technicians for the Nation, it was upgraded to Government Technical Institute on 2nd December, 1985.
After the Ministry of Science and Technology had been established in 1996, it was upgraded to Government Technological College on 2nd October, 1999 to nature technicians and engineers. It was then upgraded into Technological University (Toungoo) on 20th January, 2007.
It has been situated on the Thetshekyawhtin Street, Thawonngal Quarter, Kaytumati in Toungoo, Bago Division since April, 2008.
We believe in quality, so when you pay us to write your assignment, you will get non-plagiarized content, affordability and excellence under one roof.
စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်းကို ပဲခူးတိုင်း၊ တောင်ငူမြို.နယ်၊ ကန်ရိုးကျေးရွာအနီး၊ ရန်ကုန်−မန္တလေးအ‌‌ေ၀းပြေးလမ်းမကြီး ပေါ်တွင် ၁၉၈၂ခုနှစ်၊ မတ်လ၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အလယ်အလတ်စက်မှု လက်မှုအတက် ပညာရှင်များ တိုးမြှင့်မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေး အတွက် ၁၉၈၅ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂)ရက်နေ့တွင်အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့် ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် သိပွံနှင့်နည်းပညာ၀န်ကြီးဌာနကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် အစိုးရနည်းပညာ ကောလိပ်အဖြစ်သို့လည်းကောင်း ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀)ရက်နေ့တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ) အဖြစ်သို့ အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ကေတုမတီမြို့၊ သဝန်ငယ်ရပ်ကွက်၊ သက်ရှည်ကျော်ထင်လမ်း ပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။
Technological University (Toungoo) isatechnological university located in Toungoo Township, Bago Division, the Union of the Republic of Myanmar. It hasawide area campus about 60.61 hectares (149.771 acres).
တည်နေရာ/ လမ်း -တောင်ငူမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
ကေတုမတီမြို့၊ သ၀န်ငယ်ရပ်ကွက်၊ သက်ရှည်ကျော်ထင်လမ်း
နယ်မြေအကျယ်အဝန်း -၁၄၉.၇၇၁ ဧက